Rano mamay, asiana citron sy sakamalaho : Mampitsonika tavy haingana be
Azo ampiasaina tsara ny rano hampihenan-tena satria ny rano no manadio ny ao anaty amin’ny loto sy poizina rehetra tafiditra ao.
Ireny mantsy no mahatonga ny tavy hiandrona. Tena ilaina izany, indrindra taorian’ireny fety ireny izay nihinanana sakafo matsiro nisesisy. Misy fomba tena mety kosa hisotroana rano mba hahatonga azy hampihena tokoa.
Rano mamay na matimaty ihany
Raha ampiarahana amin’ny fanamboarana ny sakafo ho voalanjalanja tsara ny fisotroana rano mamay na matimaty dia hampihena haingana. Noho izany dia tokony hisotro rano matimaty na mamay betsaka raha te hihena. 1,5 litatra isan’andro eo.
Ny fotoana isotroana azy
Sotroina alohan’ny sakafo maraina raha mbola tsy misy na inona na inona ny vavony, mba ho voadio ny taovam-pandevonan-kanina sy ny tsinay. Sotroina mandritra ny tontolo andro avy eo.
Hitombo ny fahafahan’ny rano mafana na matimaty hanadio sy hampihena raha tapohina ranom-boasarimakirana kely. Sady be vitamina C mantsy ny voasarimakirana no manana fahafahana manapaka fahazotoan-komana sy mandoro tavy koa. Tsy tokony hatao diso tafahoatra ny fatrany anefa mba tsy hitarika fikorontanana ho an’ny vavony sy ny voa. Voasarimakirana tapany ihany ho an’ny rano 1,5 litatra.
Fomba azo hampihenana tena avy any Atsinanana koa ny misotro dite sakamalaho. Sady mampihisatra ny fahazotoan-komana izy ity no manome hery koa ankoatra izay.
Toy izao ny fanamboarana azy
Voasana ny sakamalaho 3 sm dia tetehina manify. Atao ao anaty « carafe » dia tapohina rano vao nangotraka eo amboniny. Avela hahazo ny tsiron’ny sakamalaho mandritra ny 10 minitra ilay rano. Tantavanina dia io no sotroina mandritra ny tontolo andro.
Raha ampiana voasarimakirana kely ity dite ity dia sady manapaka ny fahazotoan-komana no tsy mampitohana sady manatsara ny fandevonan-kanina koa. Hampihena haingana kokoa.